04/19/13 ~ Myanmar Forward
မြန်မာနိုင်ငံ ကုန်သွယ်မှု အထူးခံစားခွင့်နိုင်ငံ ပြန်ဖြစ်တော့မည်
မြန်မာနိုင်ငံကို ကုန်သွယ်မှု အထူးခံစားခွင့် နိုင်ငံ အဖြစ် ပြန်လည်သတ်မှတ်ဖို့ အမေရိကန် အစိုးရ ကုန်သွယ်ရေး ဆိုင်ရာ ကိုယ်စားလှယ်ရုံး USTR က ကြားနာပွဲပြုလုပ်ဖို့ ပြင်ဆင်နေပါတယ်။
အမေရိကန်ဈေးကွက်မှာ မြန်မာနိုင်ငံက ကုန်ပစ္စည်းတွေ အကောက်ခွန်မဲ့ တင်ပို့ရောင်းချ နိုင်အောင် လက်ခံသွားဖို့ ပြင်ဆင်နေ တာဖြစ်ပြီး လာမယ့်ဇွန်လ ၄ ရက်နေ့မှာ ကြားနာပွဲ တစ်ခု ကျင်းပမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီ ကြားနာပွဲမှာ မြန်မာ နိုင်ငံ အပြင် လာအိုနိုင်ငံလည်း ပါဝင်ပါမယ်။
အဲဒီလို ကုန်သွယ်ရေး ဆိုင်ရာ အထူးအခွင့်အရေး ခံစားခွင့် မြန်မာနိုင်ငံ ပြန်ရဖို့အတွက်လည်း မြန်မာအစိုးရ ဖက်က တောင်းဆိုထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။
လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်း ၂၅ နှစ် မတိုင်ခင်က မြန်မာ နိုင်ငံက ကုန်ပစ္စည်းတွေ အမေရိကန် ဈေးကွက်မှာ အကောက်ခွန်မဲ့ တင်ပို့ရောင်းချခွင့် ရရှိခဲ့ဖူးပါတယ်။ ဒါပေမယ့် စစ်အစိုးရ လက်ထက် လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖေါက်မှုတွေဖြစ်တဲ့ အဓမ္မလုပ်အားပေးခိုင်းစေတာနဲ့ အလုပ်သမားအခွင့်အရေး ချိုးဖေါက်မှုတွေ ရှိခဲ့ တာကြောင့် ၁၉၈၉ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၁ ရက်နေ့မှာ အဲဒီအထူးအခွင့်အရေးတွေကို အမေရိကန်အစိုးရက ရပ်ဆိုင်း ခဲ့တာပါ။
GSP ကုန်သွယ်မှု အထူးခံစားခွင့်ဟာ ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံတွေမှာ စီးပွားရေးတိုးတက်လာအောင် အဲဒီတိုင်ြး ပည်တွေ က ကုန်ပစ္စည်းမျိုးစုံကို အမေရိကန်ဈေးကွက်မှာ အကောက်ခွန်မယူပဲ ရောင်းချခွင့်ပေး တာဖြစ်ပါ တယ်။ အမေရိကန်အစိုးရက သတ်မှတ်ထားတဲ့ ဒီအစီအစဉ်မှာ ဆင်းရဲတဲ့နိုင်ငံ ၄၂ နိုင်ငံက ကုန်ပစ္စည်း အမျိုးပေါင်း ၅၀၀၀ လောက် အမေရိကန်ဈေးကွက်မှာ ရောင်းချခွင့်ပြုထားတာဖြစ်ပြီး ပြီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၁ ခုနှစ် က အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၈.၅ ဘီလီယမ် တန်ဖိုးရှိတယ်လို့ သိရပါတယ်။
Posted by drmyochit Friday, April 19, 2013, under သတင်းများ |6comments
ရခိုင်ဒေသနှင့် မိထ္ထီလာ ဒေသတွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သော ပဋိပက္ခများနှင့် ပတ်သက်၍ နိုဘယ်ငြိမ်း ချမ်းရေး ဆုရှင် ဒေါ်အောင် ဆန်းစုကြည်မှ မွတ်ဆလင်များ အတွက် အလွန်ဝမ်းနည်းကြောင်း ပြောဆိုခဲ့တယ်လို့ RFA သတင်း အင်္ဂလိပ်ပိုင်းမှာ ဖော်ပြထားခဲ့ ပါတယ်။
“ မကြာသေးခင်ကပဲ မွတ်စ်လင်မ်ခေါင်းဆောင် တစ်ချို့နဲ့ ကျွန်မ တွေ့ဆုံလာခဲ့ပါတယ်။ သူတို့ဟာ မြန်မာကလွဲပြီး တခြားနိုင်ငံကို မရောက်ဖူးကြပါဘူး။ မြန်မာကလွဲပြီး တခြားဘယ်နေရာကိုမှ အမိမြေအဖြစ် မခံယူကြပါဘူး။ သူတို့ကို ကျွန်မတို့ရဲ့နိုင်ငံသားမဟုတ်သလို အထင်ရောက် သွားအောင် ဖန်တီးနေတာက တကယ် စိတ်မကောင်း စရာပါ။ ဒီအနေအထားမျိုးက တကယ်ဝမ်းနည်း စရာကောင်းတဲ့ ဖြစ်စဉ်ပါ။ ကျွန်မတို့ အနေနဲ့ ဒီအရေး အရာတွေကို အခြားရှုထောင့်အမြင်ကနေ အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်လာစေဖို့ ချဉ်းကပ် လေ့လာရပါလိမ့်မယ် ”။
ထို့ပြင် မြန်မာနိုင်ငံသားဥပဒေကိုလည်း အစိုးပိုင်းမှ ပြန်လည် သုံးသပ်ဖို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မှ ပြော ကြားခဲ့သည်။ သူမ အနေဖြင့် လူမျိုးစု တို့ နိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့်အတွက် အကြိမ်များစွာ ပြောဆိုခဲ့ကြောင်း၊ သူမ ၏ ပြောဆိုချက်များသည် လူတိုင်းအတွက် ကျေနပ်စရာ ဖြစ်မည် မဟုတ်ကြောင်းကိုလည်း ပြောပြခဲ့သည်။ သို့သော် ရိုဟင်ဂျာများမှာ နိုင်ငံသား ဟုတ်မဟုတ် ကိစ္စကိုမူ တိုက်ရိုက်မဖြေကြားခဲ့ချေ။
“ နိုင်ငံသားဆိုင်ရာ ဥပဒေများဟာ နိုင်ငံတကာ စံချိန်စံညွှန်းနဲ့မကိုက်ညီယင် ဖြစ်နိုင်ချေများကို ပြန်လည် သုံးသပ်ဖို့ နိုင်ငံတိုင်းမှာ တာဝန်ရှိပါတယ်။ မြန်မာအစိုးရအနေနဲ့ ဒီလိုလုပ်နိုင်အောင် သတ္တိမွေးဖို့ လို အပ်နေတယ်။ နိုင်ငံသားကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး တရားမျှတစွာ ရင်ဆိုင်ဆောင်ရွက် ရပါလိမ့်မယ် ” ဟု သ တင်းထောက် များအား ပြောဆိုခဲ့သည်။
Opposition leader Aung San Suu Kyi expressed sadness Wednesday that some of Burma's Muslim leaders whom she met recently felt as if they did not belong to the country.
She said she has been addressing the plight of minority groups albeit in ways that people may consider "boring."
ယုဇနပလာဇာတွင် စေတီပုံ များ ရိုက်နှိပ်ထားသော အမျိုးသမီးဝတ် ထမီများ ရောင်းချ
ရန်ကုန်မြို့ ယုဇန ပလာဇာရှိ မေခလာသိန်း အထည်ဆိုင်တွင် စေတီပုံများကို အမျိုးသမီးဝတ် ထမီတွင် ရိုက်နှိပ် ထားကြောင်း မြန်မာသံတော်ဆင့် ဂျာနယ်က ဖော်ပြခဲ့သည်။ အဆိုပါ စေတီပုံ ပါသည့် ထမီများအား အစပိုင်း၌ အင်တာနက်တွင် ပျံ့နှံ့ ခဲ့သော်လည်း အစစ်အမှန်ဟု ယုံကြည်သူ နည်းပါး ခဲ့ရာမှ မြန်မာ သံတော်ဆင့်မှ တရားဝင် ဖော်ပြခြင်း ဖြစ်သည်။
ဘာသာရေး၊ သာသနာရေးအတွက် တစ်ခုခုတော့ ဥပဒေနှင့် အညီ ဆောင်ရွက် ပေးသင့်သည်သာ ဖြစ်ပေသည်။
သူ့ကိုယ်သူ ဝေလည်းမွှေး ကြွေလည်းမွှေးသူဟု ဂုဏ်ယူပြောတတ်သူ ကတော့ တပ်ကြပ်ကြီး ချစ်လှိုင်လို့ ခေါ်တဲ့ အသက် ၅၃ နှစ်အရွယ် စစ်သား ကြီးတစ်ဦးပါ။ မော်လမြိုင် တပ်နယ်က ကရင် ပြည်နယ် စစ်ဆင်ရေးများ အကြိမ်ကြိမ် ၀င်ရောက် ဖူးသူ၊ သွားလေရာမှာ ယူနီဖောင်းကို ၀တ်စုံပြည့် အမြဲဝတ်ဆင်တတ်သူ တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။
ငါတို့ ရဲဘော်သစ် သင်တန်းတက်တော့ သင်တန်း နည်းပြက ပြောတယ်။ ဘယ်လိုအကြောင်းနဲ့ပဲ တပ်ထဲကို ၀င်ခဲ့ဝင်ခဲ့၊ တပ်မတော်သား တစ်ဦးဖြစ်ပြီ ဆိုကတည်းက ယောက်ျားပီသသူ တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီ၊ တိုင်းပြည် တာဝန်ကို အသက်စွန့် ထမ်းဆောင် မယ်ဆိုတဲ့ သူရဲကောင်းတစ်ယောက် ဖြစ်ပြီ။ ဒီတော့ အတိတ် ဆိုတာ မင်းတို့ နဲ့ မဆိုင်တော့ဘဲ သူရဲကောင်း ဖြစ်မယ့် အနာဂတ်သာ မင်းတို့နဲ့ ဆိုင်တယ်တဲ့။ ငါကတော့ စစ်သားဆိုတဲ့ ဘ၀ဖြစ်ကို ဖြစ်ရမယ် ဆိုပြီး ၀င်ခဲ့တာ မဟုတ်ပါဘူးလို့ ဦးလေး တပ်ထဲကို ဘယ်လို ရောက်လာတာလဲ ဆိုသော အမေးကို ဖြေခဲ့ပါတယ်။
သူ့ရဲ့ အမျိုးသမီးကတော့ ကရင်ပြည်နယ် ဖာပွန်မြို့မှ ကရင်တိုင်းရင်းသူ တစ်ဦးဖြစ်သည်။ မောင်တစ်ထမ်း မယ်တစ်ရွက်ဖြင့် မိသားစုဘ၀ကို အေးချမ်းစွာ တည်ဆောက်နိုင်မှုကိုတော့ သူတို့၏ အိမ်အလည်လိုက် သွားသည့်အခါတွင် တွေ့လိုက်ရသည်။ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ဓာတ်ပုံ ချိတ်ဆွဲထားသည်။ တပ်တွင်းသို့ တပ် မတော် အကြီးအကဲများ လာစစ်ဆေးစဉ်က သူတို့ လိုင်းခန်းအား လာစစ်ဆေးသည့် ဓာတ်ပုံများကို နံရံတွင် ကပ်ထားသည်။
အိမ်တိုင်း ကင်ပွန်းချဉ်၊ ဆူးပုတ်၊ စားပင်သီးပင်တွေ စိုက်ထားရမယ်ဆိုပြီး စိုက်ထားကြတာ။ အိမ်တိုင်းမှာ ရှိ တယ်။ ၀က်ကတော့ တပ်ရင်း အစီအစဉ်နဲ့ မွေးထားတာ။ တပ်ရင်းက အရင်းစိုက်ပေးတယ်။ အမြတ်ပေါ်တဲ့ အခါကျတော့ အရင်းပြန်ပေး စနစ်ပေါ့။ အဆင်ပြေပါတယ်။ ဟု ကရင်သံဝဲ၀ဲဖြင့် အနော်ဟု သူများတွေ ခေါ်ကြသည့် သူ့အမျိုးသမီးက ရှင်းပြသည်။
တပ်ရင်းတစ်ရင်း အတွင်းရှိ အိမ်ထောင်သည် လိုင်းခန်းအတွင်းသို့ ပထမဆုံးအကြိမ် ရောက်ရှိခြင်းမို့ မြင်ရ သမျှ အရာတိုင်းက အထူးအဆန်း သာ။ ပြီးခဲ့သည့် နှစ် တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းစာမေးပွဲတွင် တပ်တွင်းမှ ဖြေဆို သည့် တပ်မိသားစုဝင် ကလေးအားလုံး ဂုဏ်ထူးဖြင့် အောင်ကြသည်ဟု ပြောသည့် အခါတွင်တော့ မချီး ကျူးပဲ မနေနိုင်တော့။
စစ်ဝတ်စုံဖြင့် စစ်ရေးပြ၊လက်နက်ငယ် ပစ်ခတ်စဉ်လေ့ကျင့်ခန်းများကို တပ်တွင်းမှ ရဲမေအားလုံး လေ့ ကျင့်ကြရသည်။ လယ်စိုက်သည့်ကာလ တွင်တော့ တပ်ရင်းမှူးကတော် ဦးစီး ရဲမေတစ်စုတို့ လယ်ထဲဆင်း လယ်စိုက်ရကြောင်း သိရသည်။
တပ်တွင်းမှာ ဆန်ကို အပြင်ဈေးနှုန်းထက် ၅ ဆ လောက် သက်သာတဲ့ ဈေးနဲ့ အချိုးကျ ရောင်းပေးတယ်။ လစာ တစ်ခုနဲ့ အဆင်မပြေတာ အားလုံး သိနေတာပဲ။ ဒီတော့ တပ်ရင်းတိုင်း သူ့အစီအစဉ်နဲ့သူ ဒီလို သက် သာ ဆန် စနစ်ကို လုပ်ကြရတယ်။ အရင်တပ်တုန်းကတော့ လယ်စိုက် ကျွမ်းကျင် သူလည်း မရှိ၊ အင် အား ကလည်းနည်းတော့ လယ်က မအောင်မြင်ဘူး။ ဒါပေမယ့် သက်သာဆန် ရအောင် လုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့ အတွက် တပ်ရင်းမှူးကတော့ ရအောင် လုပ်ပေးခဲ့ရတယ်။ တပ်ရင်းမှူးမှာ ၀န်တော့ ပိတာပေါ့ဟု ဆရာကြီး ချစ်လှိုင်မှ ရှင်းပြခဲ့သည်။
ယခုနှစ် တပ်မတော်နေ့ အခမ်းအနားတွင် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်မှ စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးများကို တပ် ရင်းများမှ ပိုလုပ်သင့်ကြောင်း၊ ၀မ်းစာ ဖူလုံယုံမက စားသောက်ကုန်များကို တပ်ရင်းများမှ ပေါများစွာ စိုက်ပျိုး ရောင်းချပေးပါက ကုန်ဈေးနှုန်းကိုပါ ထိန်းချုပ်ပြီး ဖြစ်ကြောင်းတို့ကို မိန့်ခွန်းတွင် ထည့်သွင်းပြော ကြားခဲ့သည်။ ယခင်က တပ်ရင်းများမှ သခွားသီး တစ်လုံး ၁၀ ကျပ်ဖြင့် လာရောင်းကြသည့် အခွန် လွတ်ဈေး များကို သတိရ သလိုလိုပင်။
ဦးပိုင်ငွေ အနေဖြင့် တပ်ရင်းမှ သိန်း ၈၀၀ ကျော် အပ်ထားသည်ဟု သိရကြောင်း၊ ဦးပိုင်မှ ရသည့် အမြတ် များ ကိုလည်း အရင်းတွင် ပြန်ထည့်ပေါင်းသည်ကပေါင်း၊ လိုအပ်သည့် တပ်ရင်း သက်သာချောင် ချိရေး လုပ်ငန်းများတွင် သုံးသည်ကသုံးသည်ဟု သိရကြောင်း ၄င်းမှ ဆက်ပြီး ရှင်းပြခဲ့သည်။
အပြင်မှာတော့ တပ်ကို အမြင်မကြည်ကြဘူး လို့ ကျွန်တော်က ပြောတော့ သူကရယ်သည်။
အရင် အစိုးရလူကြီးတွေကို တိုက်ခိုက်ချင်တာကြောင့် စစ်တပ်ကို ပုတ်ခတ်တာကနေ ဖြစ်လာတဲ့ အကျင့်ပါ။ ဈေး ထဲမှာ ဆိုင်ခန်းတွေ ဖွင့်ထားတဲ့ တပ်မိသားစုတွေ အများကြီး ရှိတယ်။ မြို့ရွာတိုင်းမှာလဲ တပ်ဆွေ တပ် မျိုး တွေ အများကြီး ရှိတယ်။ ဘယ်သူမှ စစ်တပ်က မို့လို့ ရှောင်ဖယ်တာ မရှိပါဘူး။ ရှိလဲ ငါတို့မှာ သတိထား မိဖို့ အချိန် မရှိဘူး ဟု ပြောပြခဲ့သည်။
သူတို့တွေသည် စစ်သားများ ဖြစ်ကြသည်။ အချို့ဆိုလျှင် နိုင်ငံအကြီးအကဲများကို ရုပ်သံများမှ လွဲ၍ မမြင်ဖူး ကြ။ သူတို့ သိတာ တစ်ခုသာ ရှိသည်။ သူတို့ တိုင်းပြည် တာဝန်ကို ဘယ်လို အခက်အခဲပင် ကြုံပစေ တာ ၀န်ထမ်းဆောင်မည်။ လူ့အခွင့်အရေး၊ ဒီမိုကရေစီ ရေးထက် တပ်ရင်း အသိုက်အမြုံလေး ကောင်းမွန် ဖို့သာ သူတို့ စိတ်ကူးရှိသည်။
ယောကျာ်းထဲမှာမှ စစ်သားကွ။ ဘယ်အစိုးရ တက်တက် စစ်သားဟာ စစ်သားပဲ။ ဝေလည်းမွှေး ကြွေလည်း မွှေးတယ် ဆိုတဲ့ သူ့စကားကို ပြန်ကြားရင်း ကျွန်တော့်မျက်နှာတွင်တော့ ဂုဏ်ယူအပြုံးများဖြင့်သာ..
Posted by drmyochit Friday, April 19, 2013, under နိုင်ငံတကာသတင်းများ | No comments
တနင်္လာနေ့က Boston မာရသွန်ပြိုင်ပွဲ ဗုံးကွဲမှုနဲ့ ဆက်စပ်ပြီး စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေ မှာ ဖြစ်ထွန်း တိုးတက်မှုတွေ ရှိလာပြီလို့ FBI ဗဟိုအစိုးရ ထောက်လှမ်းရေး ဗျူရိုက ပြောပါတယ်။
ဗုံးကွဲမှုနဲ့ ဆက်နွယ်ပြီးတော့ သင်္ကာမကင်းဖြစ်သူ တဦးကို ဖမ်းဆီးထားတယ် ဆိုတဲ့ သတင်းက မဟုတ်ဘူးလို့တော့ အမေရိကန် လုံခြုံရေး အာဏာပိုင်တွေက ငြင်းဆို ပါတယ်။
ဒီနောက် ပြည်ထောင်စု လုံခြုံရေး အရာရှိတွေက တရားရုံးကနေ လူတွေ ထွက်ခွာဖို့ အမိန့်ထုတ်လိုက် ရပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတာ လုံခြုံရေး အာဏာပိုင်တွေက မပြောပေမဲ့၊ New York Times Online သတင်းမှာတော့ ဗုံးကွဲနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ ခြိမ်းခြောက်မှုကြောင့် Boston ပြည်ထောင်စု တရားရုံးကနေ လူတွေကို ထွက်ခွာခိုင်းခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
Boston မာရသွန်ပြိုင်ပွဲ ဗုံးခွဲမှုနဲ့ပတ်သက်လို့တော့ စုံစမ်းစစ်ဆေးသူတွေဟာ ဗုံးကွဲတဲ့နေရာမှာရှိတဲ့ အပိုင်း အစတွေ အတော်များများကိုတော့ စုဆောင်းပြီး သုံးသပ်နေပါတယ်။ အနီးအနား အဆောက်အဦးတခု အမိုးပေါ်မှာတော့ ဗုံးထောင်ရာမှာ သုံးတယ်လို့ ယူဆရတဲ့ ပေါင်းအိုးရဲ့ အဖုံးတခုကို တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ အခြား ပေါင်းအိုးက သတ္ထုအပိုင်းအစတွေ ၀ါယာကြိုးတွေ ဘတ်ထရီနဲ့ အခြား သံတိုသံစ ပစ္စည်းတွေ ကိုလည်း ဗုံးကွဲတဲ့နေရာမှာ တွေ့ကြရပါတယ်။
Posted by drmyochit Friday, April 19, 2013, under ပြည်တွင်းသတင်းများ | No comments
သင်္ကြန်ပြီး နှစ်ဆန်းပိုင်းကာလ၌ မြန်မာ့ရွှေ ဈေးကွက်တွင် ရွှေဈေးသည် ၆လအတွင်း တစ်သိန်း နီးပါး ဈေးကျသွားသောကြောင့် ပုံမှန်နှစ်များတွင် ပြန်ရောင်းသည့် ရွှေများကိုသာ လက်ခံဆောင်ရွက် ခဲ့ကြရသော်လည်း ယခုနှစ်ဆန်းပိုင်းတွင် အကျ ကြမ်းလွန်းသော ရွှေဈေးကြောင့် ဝယ်လိုအား မြင့်တက်လျက် ရှိကြောင်း ပန်းပဲတန်းမြို့နယ် အနော်ရထာ လမ်းပေါ်ရှိ ရွှေဆိုင်များမှ သိရသည်။
ယမန်နှစ် နိုဝင်ဘာလတွင် ရွှေဈေးသည် ၁၅ပဲရည် တစ်ကျပ်သားလျှင် ကျပ် ၇၈၀၀၀၀အထိ စံချိန်သစ်ဖြင့် ဈေးတက်ခဲ့သော်လည်း ယနေ့ဧပြီလ ၁၈ရက်နေ့တွင် ၁၅ပဲရည် ရွှေဈေးသည် ကျပ်၆၃၀၀၀၀ ဖြစ်သော ကြောင့် ယမန်နှစ် စံချိန်တင် အတက်ဈေးနှင့် နှိုင်းယှဉ်လျှင် ၆လအတွင်း ၁၅ပဲရည် ရွှေဈေး တစ်သိန်းခွဲ အထိ ဈေးကျသွားခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
“သင်္ကြန်ပိတ်ရက် မတိုင်ခင် အခေါက်ရွှေဈေးက ကျပ်၇၃၀၀၀၀ကျော်ရှိတယ်။ ဒီနေ့ အခေါက်ရွှေဈေး စဖွင့်တာ ၆၇၂၀၀၀နဲ့ဆိုတော့ ၆သောင်းလောက်ကို ကျသွားတာ။ ပီးတော့ တက်လိုက် ကျလိုက်ဖြစ်နေတာ မနက်ကိုးနာရီကနေ ညနေသုံးနာရီ အတွင်းကို ဆယ်ကြိမ် မကတော့ဘူး။ ခုထိတော့ ၆၉၀၀၀၀ကို ရောက်နေတယ်” ဟု အောင်သမာဓိ ရွှေဆိုင်မှ မန်နေဂျာ ကိုကျော်လင်းထိုက်က ပြောကြားသည်။
ယမန်နှစ်များတွင် နှစ်ဆန်းပိုင်းကာလများ၌ ရွှေလာရောက်ရောင်းချသူများသာ ရှိခဲ့သော်လည်း ယခု နှစ်ဆန်းပိုင်းတွင် ထိုသို့ ရွှေဈေးများ အကျကြမ်းနေသောကြောင့် ရွှေစုလိုသူများက လာရောက်၍ အခေါက် ရွှေများကို ဝယ်ယူလျက်ရှိကြောင်းလည်း ဆက်လက် သိရသည်။
Posted by drmyochit Friday, April 19, 2013, under အနုပညာ | No comments
၂၀၁၂ ခု နှစ်သင်္ကြန်ကာလတွင် မြန်မာ့ရိုးရာ နှင့် ဆန့်ကျင်သော အဝတ်အစားများ ဝတ်ဆင်မှုကြောင့် သင်ဇာဝင့်ကျော်ကို လူအများက စိတ်ပျက်ခဲ့ကြပြီး ယခုနှစ် သင်္ကြန်မှာတော့ သင်ဇာဝင့်ကျော်ကို လုံးဝ မတွေ့ခဲ့ရပဲ အသက် ၄၇ နှစ် အရွယ် ထွန်းအိန္ဒြာဗိုလ်မှ မြန်မာ့ရိုးရာနှင့် ဆန့်ကျင်သော ဝတ်စားဆင်ရင် မှုကြောင့် နာမည်ပျက်ခဲ့ရကြောင်း မြန်မာ့အနုပညာအသိုင်းအဝိုင်းမှ လာသော သတင်းများအရ သိရသည်။
မြန်မာ့ရိုးရာသင်္ကြန်တွင် ထွန်းအိန္ဒြာဗိုလ် ဆင်နွဲခဲ့သည့် ရိုးရာနှင့် ဆန့်ကျင်သော အသက်အရွယ်နှင့် မလိုက်သည့် စိတ်ပျက်ဖွယ် ဝတ်စားဆင်ရင်မှုများမှာ
၄၇ နှစ်အရွယ် ထွန်းအိန္ဒြာဗိုလ် ရိုးရာသင်္ကြန်ကို သရုပ်ဖျက်နေချိန် ၂၇ နှစ်အရွယ် မိုးဟေကို တရားစခန်း ဝင်လျှက်ရှိ
မြန်မာ့ရိုးရန် သင်္ကြန် ကာလ တလျှောက်လုံး နှင့် ဗုဒ္ဓဘာသာ အထွဋ်အမြတ် နှစ်ဆန်း (၁) ရက်နေ့အား အရင်ဆိုင်လို၍ ဂျပန်နိုင်ငံသို့ သင်္ကြန်မတိုင်ခင် ထွက်သွားသော ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် နှစ်ဆန်း (၃) ရက်နေ့ ညနေ တွင် မြန်မာနိုင်ငံသို့ ပြန်ရောက်လာခဲ့ရာ လေဒီဂါဂါ ဓာတ်ပုံပါရှိသော ပိုစတာများဖြင့် NLD ပါတီဝင်များက Vote ဆက်တိုက်နိပ်ကာ မတရားသဖြင့် နိုင်ခဲ့ခြင်းအား အဟုတ်ကြီးလုပ်ကာ ပြသ ကြိုဆိုခဲ့ကြသည်။
လေဒီဂါဂါ နှင့် ဒေါ်စု တို့၏ အင်တာနက်ပေါ်က Vote ပြိုင်ပွဲ ဆက်ဖတ်ရန်
Posted by drmyochit Friday, April 19, 2013, under ထူးခြားဆန်းပြား | No comments
ပုံမှာ မြင်တွေ့နေရတဲ့ အကောင်ပါပဲ။ သူက ဝံပုလွေ မဟုတ်ပါဘူး။ မြေခွေးလည်း မဟုတ်ပါဘူး။ သမင် လည်း မဟုတ်ပါဘူး။ သမင်နဲ့ ဝံပုလွေ ဆက်ထားတဲ့ အကောင်လည်း မဟုတ်ပါဘူး။
တောင်အမေရိကန်မှာ လွန်ခဲ့သော နှစ်သန်းပေါင်း များစွာ ကတည်းက အသက်ရှင် နေထိုင်နေတဲ့ အကောင်များ ဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ရုတ်တရက် မြင်လိုက်ရရင် ဘာကောင်မှန်း မသိအောင်ကို ထူးဆန်း နေမှာပါ။ အကောင်အရေအတွက် နည်းပြီး တောင် အမေရိက တောနက်တွေထဲမှာ နေထိုင် ကျက်စားပါတယ်။
အနီးစပ်ဆုံးအနေနဲ့ ဝံပုလွေတို့လို Canidae မျိုးစိတ်ဝင်မို့လို ခြေတံရှည် ဝံပုလွေလို့ အမည်မဲ့ ခေါ်ပါသေးတယ်။ Maned Wolf လို့ လည်း ခေါ်ဆို ပါတယ်။ Maned Wolf ဟာ ကမ္ဘာဦး တိရစ္ဆာန်များ စာရင်းမှာ ပါဝင်ပြီး ကမ္ဘာ့အရှားပါးဆုံး တိရစ္ဆာန်များ မျိုးစိတ်များထဲမှာ တစ်ခုအဖြစ် မှတ်တမ်း တင်ထား ကြောင်း သိရပါတယ်။
Posted by drmyochit Friday, April 19, 2013, under ကျန်းမာရေး | No comments
အသားအရေ ပျက်စီးစေတဲ့ အချိန်တွေထဲမှာ သင်္ကြန်ပြီးကာ လဟာ အသားအရေ အပျက်စီးဆုံး ကာလ တစ်ခုပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကာ လအတွင်းမှာ လူပေါင်းများစွာဟာ နေ၊ ရေကြောင့် အသားအရေ ပျက်စီးရ တတ်ပါတယ်။ နေ၊ ရေကြောင့် ပျက်စီး ရတဲ့ အသားအရေဟာ အရက်သေစာ အလွန်အကျွံ သောက်စားခြင်း၊ အစားအသောက် မမှန်ခြင်းတို့ ကြောင့်လည်း ပိုပြီးပျက်စီး နိုင်ပါသေးတယ်။ နေလောင်ဒဏ် အပြင် အရေပြား တွန့်ခြင်း၊ အစက် အပြောက်များ ပေါ်လာခြင်းတို့ပါ ဆ ထက်ထမ်းပိုး ဖြစ်ပွားလာနိုင်ပါ သေးတယ်။
အသားအရေအတွက် အကျိုးပြုသော ဗီတာမင်များ ဗီတာမင်စီဟာ နေလောင် အသားအရေအတွက် အများကြီး ကုသပေးနိုင်တဲ့ ဗီတာမင် ဖြစ်ပါတယ်။ ခရမ်းလွန် ရောင်ခြည်ကြောင့် ပျက်စီးတဲ့ အပေါ်ယံ လွှာက ဆဲလ်တွေကို တစ်ဖန်ပြန်ပြီး ကုစားပေးနိုင် ပါတယ်။ ဗီတာမင် အီး ဟာလည်း နေလောင် အရေပြား ကို ကုသပေးနိုင် စွမ်းရှိပါသေးတယ်။ ဗီတာမင် အီး ဟာ ဗီတာမင် စီ လို အစွမ်းရှိရုံ အပြင် နေလောင်တာကို ရေရှည် ခံထားရတဲ့ အရေပြားတွေကို ကောင်းစွာကုသ ပေးနိုင်စွမ်းရှိပြီး အရေပြား တွန့်ခြင်းကိုပါ ကာကွယ် ပေးပါတယ်။ ဗီတာမင် အေဟာလည်း အရေပြား အားဆေးတစ်မျိုး ဖြစ်ပါတယ် အသားအရေ ကြမ်းတမ်း ခြင်းအတွက် နူးညံ့ ချောမွေ့ ညီညာလာအောင် ကူညီပေးပါတယ်။ နေလောင် ဒဏ်ကိုလည်း ကုစားပေးနိုင် ပါသေးတယ်။ ဗီတာမင် စီ၊ အီး၊ အေတို့ဟာ နေလောင်ဒဏ်အပြင် ၀က်ခြံကို လည်း ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါသေး တယ်။ ဇင့်ဓာတ်ကိုလည်း ခန္ခာကိုယ် အတွက် လုံလောက် မျှတအောင် မှီဝဲထားသင့်ပါတယ်။ (မုန်လာဥ၊ ခရမ်းချဉ်သီး၊ ကျောက်ဖရုံသီး)
နေလောင်ဒဏ် အပြင်းဆုံး အချိန် အိုကာလာဟိုးမာ တက္ကသိုလ်က လေ့လာချက်အရ မနက်(၁၀) နာရီ နဲ့ ညနေ (၄) နာရီကြားအချိန်ဟာ နေပူ အပြင်းဆုံး အချိန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ သင်္ကြန်ကာလမှာ ပျော်မြူးကြမယ့် မောင်မယ်များအတွက် SPF 15 ပါတဲ့ နေလောင်ကာ ခရမ်ကို နှစ်နာရီကြား တစ်ခါ လိမ်းပေးသင့်ပါ တယ်။
အသားအရေ အတွက် ရှောင်စရာ အစားအသောက်များ ဆီကြော်အစား အသောက် များ၊ အငန်ပါသော အစား အသောက်များ၊ အချိုဓာတ်များ သော အစားအသောက်များကို ရှောင်ပေးပါ။ ကဖင်းဓာတ် များသော အစားအသောက်တွေကိုလည်း ရှောင်ပေးသင့်ပါတယ်။ ဆေးဆိုးထားတဲ့ အစား အသောက်တွေကိုလည်း ရှောင်ပေးပါ။
အသားအရေ ပျက်စီးခြင်း အတွက် ကုစားပေးမယ့် အလှကုန်တွေ ဈေး ကွက်ထဲမှာ အများကြီး ရှိပါတယ်။ အဲဒီ့ထဲမှာမှ Tretinoin နဲ့ Tazarotene ပါတဲ့ခရင်မ်တွေဟာ နေလောင်ဒဏ်ကို အထူးကုသ ပေးနိုင်စွမ်း ရှိတဲ့ အလှကုန်တွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ၀က်ခြံကိုလည်း ကုသ ပေးနိုင်ပါတယ်။
Retin-A ပါဝင်တဲ့ အလှ ကုန်တွေဟာလည်း ၀က်ခြံ၊ အသားအရေ ပျက်စီးခြင်းနဲ့ အရေပြား တွန့် ခြင်းတို့ကို ကာကွယ် ကုသပေးနိုင်ပါတယ်။ အသားအရေ မျက်နှာပြင် ကြမ်းနေတာကိုလည်း ချောမွေ့ နူးညံ့ လာအောင် ကုစားပေးနိုင်ပါတယ်။
ခရမ်းချဉ်သီးကို ကြိတ်ပြီး ရလာတဲ့ အရည်အနှစ်နဲ့ သံပရာရည် နှစ်စက်သုံးစက်ခန့်ကို ရောပြီး မျက်နှာ ပေါ်မှာလိမ်းကျံပါ။ မိနစ်၂၀ ခန့်ကြာအောင် အခြောက်ခံပြီးမှ ရေနဲ့ ပြန်သစ်ပေးပါ။ တစ်နေ့ကို နှစ်ကြိမ် လုပ်ပေးပြီး ဆယ့်ငါးရက် ကနေရက်၂၀အထိ လုပ်ပေးရပါ မယ်။
Posted by drmyochit Friday, April 19, 2013, under နည်းပညာ | No comments
ကိုယ်က ဘောပင်မို့လို့ စာရွက်ပေါ်မှာ ချရေးတယ်။ ယင်းစာက ဖုန်း Message အဖြစ် တစ်ဖက်ကို ရောက်သွားစေမယ်လို့ ဘယ်သူက စဉ်းစားခဲ့မိဖူးပါသလဲ။
ယခု ယင်းအိုင်ဒီယာကို လက်တွေ့အကောင်အထည် ဖော်သူ တွေ ပေါ် လာတော့ D.Scribe ဒစ်ဂျစ်တယ် ဖောင်တိန် ဆိုတာလေး ပေါ်လာ ပါတယ်။ ဖုန်းမှာ ပါဝင်တဲ့ Bluetooth နဲ့ ချိတ်ပြီး စာရွက်မှာ ကိုယ် ချရေးသလို စာရေးစေပြီး အလိုအလျောက် ပို့ပေးစေပါတယ်။ ဒီတော့ Keypad သို့်မဟုတ် keyboard တို့ကို အသုံးပြုနေစရာ မလိုတော့ပါဘူ့း။ စာရေးရတာ ပိုဝါသနာပါသူ၊ အားသန်သူများအတွက်လည်း အဆင် ပြေါတယ်။
ရေးသမျှစာကို နီးစပ်ရာ standard font ပုံစံပြောင်းပေးပြီး ပို့ ပေး ပါတယ်။ ဖုန်းမှာ ပါဝင်တဲ့ Language အလျောက် ဘာသာစကား အတော်များများ အတွက် အသုံးပြုနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ယင်း D.Scribe digital fountain pen ကို ယခုနှစ်ဆန်း ပိုင်း အတွင်း ဖြန့်ချိနိုင်ရန် ကြိုးပမ်းလျက် ရှိကြောင်း သိရပါတယ်။
ကမ္ဘာ့တန်ကြေးအမြင့်ဆုံးအသင်းအဖြစ် ရီးရဲလ်ရပ်တည်ပြီး မန်ယူကို ကွင်းတွင်းကွင်းပြင်ကျော်ဖြတ်နိုင်ခဲ့
Posted by drmyochit Friday, April 19, 2013, under အားကစားသတင်း | No comments
အမေရိကန် စီးပွားရေး မဂ္ဂဇင်း Forbes မှ ကောက်ယူသော စစ်တမ်းအရ ရီးရဲလ်မှာ ဒေါ်လာ ၃.၃ဘီလီယံဖြင့် ကမ္ဘာ့တန်ဖိုး အမြင့်ဆုံးကလပ် အသင်းအဖြစ် ရပ်တည်ခဲ့သည်။ Forbesမှာ အားကစားဆိုင်ရာ စစ်တမ်းများကို ၂၀၀၄ခုနှစ်မှ စတင်ကောက်ယူခဲ့ပြီး မန်ယူမှာ ကမ္ဘာ့တန်ဖိုး အမြင့်ဆုံး ကလပ်အဖြစ် ၉နှစ်ဆက် ရပ်တည်ခဲ့ သော်လည်း ယခုနှစ်တွင်မူ ဒေါ်လာ ၀.၁ဘီလီယံ ကွာခြားချက်ကြောင့်ရီးရဲလ်၏ကျော်ဖြတ်ခြင်းခံခဲ့ရသည်။
ကမ္ဘာ့တန်ဖိုးအမြင့်ဆုံးအသင်းမှာ ကွင်းတွင်းအောင်မြင်မှုများကိုဘဏ္ဍာရေးတိုးတက်မှု အဖြစ် ပြောင်းလဲနိုင်သည့် အသင်းဖြစ်ကြောင်း Forbesမှ ညွန်းဆိုခဲ့ပြီး ရီးရဲလ်၏ ရုတ်ချည်းတိုးတက်မှုကြောင့် မန်ယူအနေဖြင့် ဒုတိယနေရာ ဆင်းပေးခဲ့ရသော်လည်း ဘဏ္ဍာရေးအရ စိုးရိမ်ဖွယ်ရာမရှိဟု ဖော်ပြ ထားသည်။ “ မန်ယူရဲ့ဘဏ္ဍာရေးကျဆင်းသွားလို့ ရီးရဲလ်က ကျော်တက်သွားတာ မဟုတ်ပါဘူး။ ရီးရဲလ်ရဲ့ ၀င်ငွေတိုးပွားမှုက တဒင်္ဂအတွင်း အဆမတန်တိုးတက်လာခဲ့လို့ အဆင့် ၁နေရာကို လွှဲပြောင်း ယူနိုင်ခဲ့ တာပါ”ဟု Forbes မဂ္ဂဇင်းမှ ရှင်းလင်းသွားခဲ့သည်။
Forbes မှထုတ်ပြန်သော စစ်တမ်းတွင် တစ်နှစ်တာအတွင်း တန်ဖိုးမြင့်တက်မှုများ ပါဝင်ခဲ့ကာ ရီးရဲလ်မှာ ၇၆ရာခိုင်နှုန်း၊ မန်ယူမှာ ၄၂ရာခိုင်နှုန်း တိုးမြင့်ခဲ့ကာ ဘာစီလိုနာမှာ ၉၉ရာခိုင်နှုန်းထိ မြင့် တက်ခဲ့ပြီး ကမ္ဘာ့ တန်ဖိုး အမြင့်ဆုံး အဆင့် ၃နေရာတွင် ရပ်တည်နိုင်ခဲ့သည်။ ကမ္ဘာ့တန်ဖိုးအမြင့်ဆုံး အားကစား အသင်းများ စာရင်းတွင်လည်း ရီးရဲလ်၊ မန်ယူ၊ ဘာကာတို့မှာ အစဉ်လိုက်အတိုင်း ရပ်တည်နိုင်ခဲ့ပြီး အဆင့် ၄နေရာတွင် ဘေ့စ်ဘောကလပ် နယူးယောက်ယန်းကီးနှင့် အဆင့် ၅နေရာတွင် ဒဲလက်စ်ကောင်းဘွိုင်တို့မှ ရပ်တည် ခဲ့ကြသည်။
အက်ဖ်အေဖလားမှ အမှားအတွက် လူးဝစ်ဇ်ကို အဂူရို ပြန်တောင်းပန်
ချဲလ်ဆီးနှင့် ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့သော အက်ဖ်အေ ဖလား ပွဲစဉ်တွင်နောက်ခံလူလူးဝစ်ဇ်ကို ခြေစုံပစ်ဖျက်ထုတ် ခဲ့ခြင်းအတွက် မန်စီးတီး တိုက်စစ်မှူး အဂူရိုက ပြန်လည် တောင်းပန်သွားခဲ့သည်။ အဂူရိုမှာ လူးဝစ်ဇ် ၏တင်ပါးကို ခြေစုံပစ် ကန်ကျောက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကာ ယင်းကဲ့သို့ ထိခိုက်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးနောက် တောင်းပန် ခဲ့ခြင်းမရှိပေ။ သို့သော် လူးဝစ်ဇ်က ဘောလုံးပွဲများ၏ အလှအပကို ယင်းကဲ့သို့ အဖြစ်အပျက်များကြောင့် မထိခိုက်စေလိုကြောင်း၊ လူငယ်များ အတုယူမှား မည်ကို မလိုလားကြောင်း၊
ဖြစ်ပွားခဲ့သောကိစ္စအတွက် မိမိဘက်မှ တောင်းပန် ကြောင်း မန်စီးတီးနှင့် ပွဲစဉ်အပြီး၌ ဖော်ပြခဲ့သည်။
ထို့နောက်တွင် အဂူရိုက ၎င်း၏တွစ်တာ စာမျက်နှာမှတစ်ဆင့် အဂူရိုကို ပြန်လည်တောင်းပန်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကာ မဖြစ်သင့်သည့်အမှားမျိုး ကျူးလွန်မိ ခဲ့ခြင်းကြောင့် နောင်တရမိသည်ဟု ၀န်ခံခဲ့သည်။ အဂူရို၏ တောင်းပန် မှုကို လူးဝစ်ဇ်က လက်ခံခဲ့ပြီး ၎င်း၏ပွင့်လင်း ရိုးသားသော စိတ်ထားအတွက် ကျေးဇူးတင်သည်ဟု တွစ်တာ တွင် ပြန်လည် ရေးသားခဲ့သည်။
ကမ္ဘာကိုလွှမ်းမိုးမှုအရှိဆုံး လူ ၁၀၀တွင် ဘာလော့တယ်လီ ပါဝင်
Time Magazine မှရွေးချယ်သော ကမ္ဘာကို လွှမ်းမိုးမှု အရှိဆုံး လူ ၁၀၀တွင် အေစီမီလန် တိုက်စစ်မှူး ဘာလော့တယ်လီ ပါဝင်လာခဲ့သည်။ ဘာလော့တယ်လီမှာ အင်္ဂလန်မှ စီးရီးအေသို့ ပြန်လည်ပြောင်းရွှေ့လာခဲ့ပြီးနောက်တွင် ခြေစွမ်းပိုပြ လာနိုင်ခဲ့ပြီး စီးရီးအေဘောလုံးလောကတွင် အဖြစ် များလာသော လူမျိုးရေးခွဲခြားမှုများကို တိုက်ဖျက် နိုင်မည့်သူဟု ညွန်းဆိုခြင်း ခံနေရသူလည်း ဖြစ်သည်။
ဘာလော့တယ်လီနှင့်ပတ်သက်၍ အီတလီ ယူ-၂၁အသင်းတွင် ခဏတာလက်တွဲခဲ့ ဖူးသော နည်းပြဇိုလာက"ဘာလော့ တယ်လီဟာ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ဖြစ်နေတဲ့ ကိစ္စတွေကို ခေါက်ထားနိုင်သူပါ။ သူ့ရဲ့စိတ်အေးချမ်းတည်ငြိမ်မှုက ထိပ်တန်းကစားသမားတွေ မှာမှ တွေ့ရတတ်တဲ့ အရည်အသွေးဖြစ်သလို အားကစားစိတ်ဓာတ်ပြည့်ဝပြီး စွမ်းရည်ထူးကဲသူလည်း ဖြစ်ပါ တယ်။ သူ့ကိုယ်သူ နှိမ့်ချတတ်သလို နှစ်လိုဖွယ်ကောင်းတဲ့ ကစားသမားတစ်ယောက်ပါ။ ဒါပေမဲ့ သူ့ကိုယ်သူ ထိန်းချုပ်တတ်ဖို့တော့ လိုပါတယ်"ဟု မှတ်ချက်ချခဲ့သည်။
ထို့အပြင် ဘာလော့တယ်လီ၏အေးဂျင့် ရိုင်အိုလာကလည်းကမ္ဘာကိုလွှမ်းမိုးမှုအရှိဆုံး လူ၁၀၀တွင် ၎င်း၏ ကစားသမား ပါဝင်လာခြင်းကို အနည်းငယ်မျှ အံ့အားမသင့်ဟု ဆိုသည်။ " သူဟာ သာမန်လူငယ်လေး တစ်ယောက်ပါပဲ။ ဒါပေမဲ့ ၁၆နှစ်သားကတည်းက သူ့ပခုံးပေါ်ကျရောက်လာတဲ့ တာဝန်တွေကို ကျေကျေ ပွန်ပွန် ထမ်းဆောင်နိုင်သူပါ။ အီတလီက ယောကျာ်း၊ မိန်းမ၊ ကလေးတွေအပေါ်မှာ သူ့ရဲ့လွှမ်းမိုးမှုရှိနေလို့ ဒီရွေးချယ် မှုမှာ သူပါဝင် လာတာကို ကျွန်တော် မအံသြပါဘူး"ဟု ဂုဏ်ပြုသွားခဲ့သည်။